Bilaogera Amerikana Notoloram-Bola Hamoaka Propagandy Rosiana · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 29 Marsa 2015 7:56 GMT
Vakio amin'ny teny বাংলা, русский, Ελληνικά, Español, Français, عربي, English
Nadabok'ilay bilaogera Amerikana iray tamin'ny faran'ny herinandro teo ny tolotra tsy indroa mandalo eo amin'ny fiainana: mahazo vola tsy manao na inona na inona. Ny manahirana kely dia tsy maintsy mamoaka lahatsoratra nosoratan'olon-kafa ao amin'ny bilaoginy nefa lazaina fa izy no nanoratra azy—tsy dia raharaha goavana, sa ahoana?
Araka ny nolazain'ilay bilaogera, David Swanson, taorian'ny nanaovany resadresaka tao amin'ny hetsika iray manohitra ny ady tao Washington DC tamin'ny 20 Marsa, dia nisy zatovolahy miroky rosiana be izay nilaza ny tenany ho Alexsei G. Padalko. Nasehon'ity lehilahy ity tamin'i Swanson ny karatry ny asany, izay manondro azy ho attaché lefitra (an'habakabaka) ao amin'ny Ambasady Rosiana ao Etazonia. Nividy iray tamin'ny boky [namidin'i] Swanson izy, nangaaka ny hametrahana hafatra kely sy hanasoniavana ny boky, ary nividy kafe iray tasy ho an'i Swanson, mba ahafahana miresaka vinavina ahafahana miasa “mba hahatontosa ny fandriampahalemana.”
Nihaona i Swanson sy i Padalko ny andro manaraka io, ary dia nolazaina fa nanolotra vola bebe ihany i Padalko mba amoahana lahatsoratra efa vita momba ny toe-draharaha any Okraina mba ho tahaka an'i Swanson ihany no nanoratra azy.
MIlaza izy fa manana tombontsoa manokana hisian'ny fandriampahalemana sy faniriana hitazona izany ho tsiambaratelo tsy fantatry ny mpampiasa azy. Nahafinaritra ny nandefa imailaka azy, hoy ny filazany, saingy tsy maintsy manome ahy tonga vatana mihitsy izy hanome ahy ny lahatsoratra.
Nandà ny hamoaka amin'i Swanson izay lazaina ho torohay sy niavian'ny vola i Padalko. Nilaza i Swanson fa notsipahiny ny tolotra.
Nilaza taminy ny fomba fihetsika fanaovan-gazety aho ary nampiseho hagagana sy ahiahy mba hanandratra ny fanaovan-gazety hatramin'ny nahabilaogera ahy. Heverina fa ny bilaogera dia olona iray azonao fahanana fampielezan-kevitra, raha olona miezaka ny hahatratra anao kosa ny mpanao gazety. Niezaka niteny taminy aho fa liana amin'ny famoahana ny zavamisy ao Okraina ho an'ny vahoakan'i Etazonia ary nieritreritra aho fa ny fanaovako izany dia ho tombotsoan'i Rosia sy ny fandriampahalemana.
Araka ny voalazan'ny blaogin'i Swanson, nisy fifandraisana imailaka fohy nanaraka ny fihaonan-dry zareo tao amin'ny fivarotana kafe, na dia nitsahatra namaly aza i Padalko.
Ny zava-mampihomehy, i Swanson sy ny blaoginy dia manohana ny fomba fijerin'ny pro-Rosiana, ka izay no mahatonga ilay zava-nitranga ho nandiso fanantenana azy tanteraka eo imasony. (Izay koa angamba no nahatonga an'i Padalko tsy nisalasala nanatona an'i Swanson.) Tao amin'ny lahatsoratra nanehoany ny fihetseham-pony no nilazan'i Swanson ny fiovam-pitondrana tao Kyiv ho “fanonganam-panjakana mahery setra notohanan'i Etazonia,” ny governemanta vaovao ho “napetraky ny vahiny,” ary nilaza izy sy ny hafa fa tsy faly tamin'ny “fihetsika tsy misy fototra nataon'i Rosia, ny lainga amin'ny fananiham-bohitra ataonao.” Saingy tsy azo ahodikodina i Swanson ny amin'ny tsy tokony hiezahan'i “hampiraikitra lainga” momba ny “fanafihan'i” Moskoa amin'ny “fanaovana fihetsika maherisetra.”